यही लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत हामी समाजवादमा पुग्नुपर्छ - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
यही लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत हामी समाजवादमा पुग्नुपर्छ
२०७५-०६-१० बिचार / प्रतिक्रिया
डा. रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति
मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन ओटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै र त्यससँग सम्बन्धित कानुन बनेसँगै संविधान करिब कार्यान्वयन तहमा आएका छन् । धेरैले कुनै बेला नेपालमा संविधान बन्ला र ? भन्ने प्रश्न खडा गर्थे । धेरैलाई संविधान कार्यान्वयन हुने कुरामा पनि आशंका थियो । तर, ती सबै आशंकालाई गलत साबित गर्दै अहिले नेपाली जनताले चुनेका आफ्नै जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधानको जनताले उपयोग गरिरहेका छन् । यो खुशीको कुरा हो । २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको ‘नेपालको संविधान–२०७२ संविधानसभाबाटै घोषणा गर्दा मुलकभरि र विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीले पनि निकै ठूलो खुशी व्यक्त गरेका थिए । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनसहित घोषणा भएको संविधानमा केही मधेसवादी दलहरुले विरोध गरेका थिए । ती दलले पनि अहिले संविधानलाई स्वीकार गरेपछि संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनेको छ । यद्यपि केही संशोधनको पाटो भने बाँकी छ । यो पटक २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान–२०७२ संविधानसभाबाटै घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त गरेका र अहिले सामान्य नागरिकसरह ललितपुमा सरकारले उपलब्ध गराएको एक निवासमा बसोवास गरिरहेका पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–
ठिकै–ठिकै छ ।
२००७ सालदेखि नेपाली जनताले चाहेको संविधान तपार्इंका पालामा नेपाली जनताले प्राप्त गरे । लाखौं नेपालीको चाहना पूरा गर्ने नेपालको संविधान–२०७२ तपाईंले नै घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो । ती दिन सम्झिँदा कस्तो लाग्छ ?
संविधान त्यसै र फुत्त आएको होइन । नेपाली जनताले यो संविधान प्राप्त गर्नका लागि निकै ठूलो बलिदान र संघर्ष गर्नुपरेको छ । यति लामो संघर्षमा सहभागी भएका लाखौं नेपालीमध्ये एक जना म पनि हुँ । त्यसैले म आफैँ पनि संविधान जारी भएको दिनको सम्झना गर्दा भावुक हुन्छु । निकै ठूलो गौरवको अनुभूति हुन्छ । असोज ३ गते हामीले संविधान जारी गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु आम नेपालीका लागि निकै ठूलो गौरव र खुशीको कुरा पनि हो । मैले मेरो हातबाट नेपाली जनताको सामुन्नेमा संविधान जारी गर्ने मौका पाएँ । त्यो म आफ्नै लागि त झन् खुशीको कुरा हो । संविधान घोषणा गर्दै गर्दा पनि मलाई सबैको सहमति जुट्न सकोस् भन्ने लागेको थियो । मैले त्यसका लागि निकै ठूलो प्रयास पनि गरेको थिएँ । तर, अपेक्षाअनुरुपको सहमति जुट्न सकेन । सबैको सहमति जुट्न सकेको भए त्यतिबेला अझ धेरै खुशी हुने थिएँ ।
अहिले त तपाईंको चाहना पूरा भएको छ नि त ? त्यतिबेला संविधानको विरोध गर्ने संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा छ । राजपा पनि अहिले संविधानको पूरै विरोध भन्दा पनि केही बुँदामा मात्र असहमति रहेको भन्दै हिँडेको छ । भनेपछि त अब सन्तुष्ट हुनुहोला नि ?
संविधान सबैका लागि सर्वस्वीकार्य दस्तावेजका रुपमा विक्षित हुने देखिएको छ । यो खुशी कुरा हो । आज मधेसकेन्द्रित भनिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) त्यतिबेला संविधानको विरोधमा थिए । उनीहरुले त्यो संविधानलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । म मधेसको समस्या पनि संविधान जारी भएसँगै समाधान होस् भन्नेमा थिएँ । तर, संविधान जारी हुँदा मधेसकेन्द्रित दलको असहमति रहँदै गर्दा मलाई पनि केही असजिलो भएको थियो । त्यसकारण पनि म भावुक भएको थिएँ । मधेस देशभित्र छ । मधेसको समस्या आफ्नो देशभित्रको समस्या हो । मधेसको समस्या आन्तरिक समस्या हो भन्नेमा म थिएँ । हामी आफैँले आफ्नो भूराजनीतिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ र अहिले पनि छु । मैले अघि पनि भनें । अहिले समस्या बिस्तारै हल हुँदै गएको छ । सबैले संविधानलाई केही असहमतिका बीच पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ । यो संवैधानिक विकासका लागि ठूलो उपलब्धि पनि हो ।
यो महान उपलब्धिबाट तपाईं खुशी हुनुहुन्छ ?
यो अवसरबाट दुःखी हुनुपर्ने कारण मैले देखेको छैन । हामीले धेरै अप्ठ्यारालाई पार गरेर यहाँसम्म आएका छौं । अहिले सरकारमा रहेका दल, विपक्षी दल, पत्रकार, मानवअधिकारवादी सबैले ‘वाच डग’को भूमिका खेल्नुपर्छ । देशलाई आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढाउनुपर्छ । हामीसँग योबाहेक विकल्प नै छैन । अहिले हामीले आशाबाहेक निराशा देख्ने ठाउँ नै छैन । म फेरि पनि भन्छु । सबैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । नेपाली जनता अहिले निकै धेरै सचेत भएका छन् । कसैले गल्ती ग¥यो भने जनताले नै सजाय दिन्छन् । त्यसैले कसैले पनि अहम्ता राख्नु हुँदैन । सबैले धेरै ठूलो छाती बनाएर, सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी सबैले कानुनी राज्यको मान्यतालाई शीरोधार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले सबै विविधतालाई जोड्दै अघि बढ्नुपर्छ । पहिला राष्ट्र हो । त्यसपछि राजनीतिक दल हो । त्यसपछि मात्र सत्ता हो । हामीले यो कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रका लागि निकै लामो समय लडेको दल नेपाली कांग्रेस अहिले विपक्षमा छ । देशमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकारबाट अपेक्षाचाहिं कत्तिको गर्नुभएको छ ?
अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ । त्यही सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी छ । राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन दिएको छ । त्यसैले यो अवसरलाई संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाबाट सबै समस्याको हल गर्नुपर्छ । यो भयो भने मात्र संविधानको सार्थकता हुन्छ र संविधान पनि दीर्घायू हुन्छ । संविधानमा थप सुधार र परिमार्जनका लागि अहिले माहोल बनेको छ । यो अर्को ठूलो अवसर हो । यसको सदुपयोग सरकार र संशोधनको माग गरेका दलहरुले गर्नुपर्छ र गर्न सकुन् भन्ने मेरो चाहना छ । सरकारलाई समर्थन र सहमतिको वातावरण पनि बनेको छ । यो नेपाली जनताले नियालिरहेका छन् । यो जिम्मेवारी पनि अहिलेको सरकारको काँधमा आएको छ । संविधानमा भएका असन्तुष्टि र गुनासाहरुको सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानको कार्यान्वयन हुँदै जान सकोस् मेरो यही चाहना छ । निश्चय पनि चुनौती छन् । अहिले पनि कतिपय कानुन बन्न नै बाँकी छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेको छ । यसमा हतार नगरी राम्ररी कानुन बनाएर दीर्घकालीन रुपमा पनि सजिलो हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि यो सरकारको काँधमा छ ।
भनेपछि अबका पुस्ताले परिवर्तन–परिवर्तन भन्दै आन्दोलन गर्ने दिन नआउलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
फेरि परिवर्तनका लागि भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने मेरो पनि कामना छ । अहिलेको संविधान लोकतान्त्रिक छ, समावेशी छ । मिश्रित प्रणालीलाई अपनाएको छ । हामीले विश्वको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर संविधान बनाएका छौं । तर, यसमा सन्तुलन कायम राख्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि सहमति थियो । त्यसैबेला पनि मैले समावेशी राज्य निर्माणको चुनौती छ भनेको थिएँ । अहिले ती धेरै कुरा हल हुँदै गएका छन् । हामीले समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थासहितको संविधान भनेका छौँ । हामीले यही लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत समाजवादमा पुग्नुपर्छ । यस कुरामा पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान सकोस् भन्ने मेरो कामना छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त यो संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने आम नेपालीको पनि चाहना छ । यो संविधान सफल होस् र नेपाली जनताले शान्ति, स्थिरता र विकासमा आम नेपाली अघि बढ्न सकुन् भन्ने पनि मेरो कामना छ ।